मह अमृत पनि, विष पनि » Khulla Sanchar
मह अमृत पनि, विष पनि
मह स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदा जनक चीज हो । जसको सेवन गर्न जाने हाम्रो शरीरलाई फाइदा पुग्छ भने खान नजाने यस
ले विष समान हानी पु¥याउँछ । यसको प्रयोग विभिन्न रोगमा प्रभावकारी मानिन्छ । यौन क्षमता बढाउने यो अचुक उपाय नै हो । महिलाले सेवनले गर्दा घटेको यौन क्षमता पुनः जागृत भएर आउँछ ।
यौन क्षमतालाई बचाइराख्न पनि मह खानुपर्छ । यसको अलावा महले व्यक्तिको स्मरण शक्ति बढाउँछ । खानामा रुचि बढाउन होस् वा खोकी कब्जियत जस्ता रोग निको पार्न यो उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । अल्सरका रोगीका लागि मह प्रभावकारी औषधि नै मानिन्छ । आयुर्वेदमा मात्र नभएर एलोपेथिक उपचार पद्धतिमा समेत महलाई गुणकारी औषधिका रुपमा मान्यता दिइएको छ । तर हामीले खाने मह भने मिसावटयुक्त हुनु हुँदैन ।
माहुरीले बनाएको शुद्ध मह हुनुपर्छ । गाउँघरमा पाइने शुद्ध महले औषधिको काम गर्छ । महले थकान कम गर्छ । अत्यधिक गर्मीको बेला मह खाएपछि तातोपानी, दही वा चिनी कफी खानु हुँदैन । दैनिक एकदेखि दुई चम्चा मह मनतातो पानीमा वा दूधमा मिसाएर खानु राम्रो मानिन्छ ।
मह खाँदाका फाइदा
१. अदुवाको रसमा या काढ़ामा मह मिसाएर खानाले खोकी सञ्चो हुन्छ ।
२. पाकेको आँपको रसमा मह मिसाएर जण्डिसको रोगीलाई खुवाउनाले लाभ हुन्छ । बच्चालाई चीनीको साटो मह दिन सकिन्छ ।
४.शुष्क त्वचामा मह, दूधको तर क्रीम र बेसन मिसाएर लगाउने । यसले त्वचाको शुष्कता हटाउँछ र लावण्यता प्राप्त हुन्छ ।
५. एक गिलास दूधमा मह मिसाएर राती पीउनाले दुब्लोपन हटेर शरीर सुडौल, पुष्ट र बलशाली बन्छ ।
७. प्याजको रस र मह बराबर मिसाएर चाट्नाले कफ निस्कन्छ र आँतमा जमेको विजातीय द्रव्यहरू हटाएर नष्ट गर्छ । यसलाई पानीमा घोलेर एनीमा लिनाले लाभ हुन्छ ।
८. हृदयको धमनीको लागि मह बड़ो शक्तिवर्द्धक हुन्छ । सुत्ने बेला महर कागतीको रस मिसाएर एक ग्लास पानी पीउनाले कमजोर हृदयमा शक्तिको संचार हुन्छ ।
११. महले मांसपेशीहरू बलवती हुन्छ ।
१२.बढ़ेको रक्तचापमा महको सेवन लसुनको साथ गर्नु लाभप्रद हुन्छ ।
१४. सुन्तलाको बोक्रालाई सुकाएर धुलो चूर्ण बनाएर दुई मह चम्मच ट्ट्यस्मा फिटेर तयार गरेर छालामा दल्ने। यसले छाला चम्किन्छ र मुस्कान् छाउँछ ।
तर मह खान जाने फाइदा र नजाने बेफाइदा हुने आयुर्वेदिकविज्ञहरू बताउँछन् । महको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा आयुर्वेद विज्ञहरूको भनाई यस्तो छ ।
–महलाई आगोमा कहिले पनि तताउनु वा उमाल्नु हुँदैन ।
–यदि कसैले विष सेवन गरेको छ भने त्यो बेला मह खुवाउँदा विषको प्रभाव अझ बढेर मृत्युनजिक पु¥याउँछ ।